संस्मरण / नियात्रा Archives - HongKong Khabar
Tag: संस्मरण / नियात्रा
डा. गोविन्दराज भट्टराई दुबाई छोडेर एकघण्टाको हवाई उडानपश्चात्ताप उनीहरुले हाम्रो दिवा भोजन (लञ्च) वितरण गरे । आकाश एक सीमा–क्षेत्रमाथि पुगेको थियो होला । एउटी ‘लुमिनिता’ नाम टाँसेकी परिचारिकाले सर्वप्रथम हामी शाकाहारीजतिका भोजन व्याक ल्याइन् । एउटा फराकिलो किस्तीमा सजाएर ल्याइएका सर्दाममा एक ससनो प्लाष्टिक बट्टाभरि मिश्रित फलफूलका चाना, अर्काे बट्टामा हरियो सलाद, ब्राउन ब्रेडका दुई टुक्र...
- डा. गोविन्दराज भट्टराई भाग— १ भोलि हामी ग्रीसको लामो यात्रामा निस्कने भएका छौँ । त्यसैले बिहानैदेखि झोला सुटकेश मिलाई यात्राको अन्तिम तयारी गर्नु परेकाले गर्दा आज अति व्यस्त हुनुपरयो । लामो यात्रा छ हाम्रो, तीन हप्ताको । ग्रीसको नाम मात्र लिनाले पनि मेरो हृदयमा आनन्द र उत्साहको संचार हुन थाल्छ । यो मानव सभ्यताको आदिम कोक्रो, यसको सम्झनाले सबको हृदयलाई छुन्छ । मेरो यस भूमिप्रति गहिरो प्रेम र श...